China Otu esi eji ihe omuma nke dijitalụ na ulo oru ulo oru ulo oru? ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | SYTON
Bar agbatị Screen
Industrial PC Nyochaa
Touch Screen miri
Ft Guzosie Advertising Player
Aka Screen ad Player
Ihe eji egwu Net Net
Wall Ugwu Advertising Player
Aka Screen Wall Ugwu ad Player
Net Version Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na ad Player
N'èzí Advertising Player
Ft Guzosie N'èzí ad Player
Wall Ugwu N'èzí ad Player Gear Reductor
Mgbidi vidiyo LCD
Akpụkpọ ụkwụ Polish ad Player
Advertisinggba egwu Mgbasa ụgbọ ala
ịga nke ọma Cooperation
Etu esi eji ihe omuma nke dijitalụ na ụlọ ọrụ owuwu ụlọ?
SYTON arụnyere ihe ngosi nke dijitalụ maka oghere ụlọ ọrụ. Ọrụ ya gụnyere ịpịgharị akụkọ, ihu igwe, ihe nkiri mgbasa ozi, ndepụta mmemme na ọrụ ụlọ ọrụ
Kwa ụbọchị, ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụwa na-amalite iji akara ngosi dijitalụ iji nye ahụmịhe mkparịta ụka na-atọ ụtọ, nke nwere mmasị na nke bara uru maka oghere ụlọ ọrụ. Site na mpempe akwụkwọ nnabata na katalọgụ dijitalụ, akara ngosi dijitalụ n'ọnụ ụlọ ahụ nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ụlọ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji akara ngosi dijitalụ maka nkwukọrịta n'ime.
Ka anyị leba anya n'ọtụtụ ụzọ iji jiri akara ngosi dijitalụ n'ọnụ ụlọ ụlọ ọrụ.
Jiri akara ngosi dijitalụ na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ gị iji kọwaa akụkọ ụlọ ọrụ gị nke ọma, ozi, ọhụụ, usoro iheomume, ndị nwere oke, na ihe ọ rụzuru nye ndị ahịa na ndị ọrụ ọhụụ. Usoro a nke ịkesa akụkọ ụlọ ọrụ bụ nke ugbu a, nke toro eto na nke ọhụụ. Vidiyo ụlọ ọrụ dị mkpụmkpụ na akụkọ banyere ndị ahịa nwekwara ihe ukwu. Ha nwere ike ịgwa gị akụkọ gị ma n'otu oge ahụ mee ka ihe kpatara na otu ụlọ ọrụ gị si dị iche.
Nye ndị ọbịa gị ohere dị mfe ịchọta ozi dị mkpa. Iji dijitalụ katalọgụ, i nwere ike tinye aka-ihuenyo wayfinding map, ozi kọntaktị, Suite nọmba, wdg The dijitalụ katalọgụ nwere ike na-emelite na ozugbo site na ebe ọ bụla, na i nwere ike depụta tenants site n'ala, ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ mkpụrụ okwu iji.
Na mgbakwunye na ndepụta dijitalụ dijitalụ, ị nwekwara ike hazie ọdịnaya ihuenyo na ozi nnabata omenala maka ụfọdụ ndị ọbịa na ndị ahịa. Enwere ike ịhazi ozi ndị a ka ha rụọ ọrụ na-akpaghị aka ma gwụ na ụbọchị na oge akọwapụtara.
Paseeji vidiyo vidiyo
Mgbe ndị ọbịa batara n'ọnụ ụlọ ọrụ gị, ọ dị mkpa ka ị mepụta echiche mbụ dị mma ma dị mma. Nke a na-akọwapụta ọnọdụ onye ọbịa n’oge nleta ahụ niile. Bestzọ kachasị mma iji mee nke a nke ọma bụ iji akara ngosi ụlọ ọrụ dijitalụ n'ụdị mgbidi vidiyo (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, wdg). Mgbidi TV ga-ahapụ mmetụta miri emi na nke pụrụ iche. Nke a bụ nnukwu ụzọ iji mee ka akara gị pụta!
Iji gbakwunye ihe ijuanya, ị nwere ike ịnabata ndị ọbịa na ozi nnabata ahaziri iche na onyonyo, ederede, na ozi ndị ọzọ metụtara ndị ọbịa gị. I nwekwara ike iji mgbidi vidiyo gosiputa ụdị ọdịnaya niile na-adọrọ mmasị, dịka ozi ngwaahịa na mgbasa ozi ọhụụ, ihe omume ndị na-abịanụ, akụkọ ụlọ ọrụ dị ugbu a na ntanetịime ntanetị. Ọ na-enyekwa ohere ịmekọrịta mmekọrịta nkeonwe na nke bara uru, nke ga-adọta ndị ọbịa na ndị ọbịa.
E jiri ya tụnyere iji akara ngosi akwụkwọ mmado ma ọ bụ bọọdụ mkpọsa, mmetụta nke mgbidi vidiyo dị ezigbo mkpa. A sị ka e kwuwe, ịchụ nta ụlọ ọrụ bụ isi mmalite nke ndị ọbịa niile, ma ha bụ ndị ọbịa ọhụụ ma ọ bụ ndị ọbịa na-alọta. Yabụ kedu ihe na - ejighị akara ngosi dijitalụ n'ọnụ ụlọ nnabata iji mepụta ahụmịhe a na - agaghị echefu echefu na nke ndị ọbịa, ka ị nwee ike iji ohere a mee ihe kachasị?
Post oge: Mar-20-2021
anyị akara ukwu, leaderships, innoation, ngwaahịa
Okwu: 2nd Ft, 1st Bldg., Senyang Hi-Tech Science Park, No.7 Rd.,
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
Touch Screen miri, Touch Screen Interactive miri , Self Service Interactive miri , N'èzí Digital signage ugboro abụọ , Interactive Touch Screen miri , Interactive miri ,
ndewo, kedu ka m ga - esi nyere gi aka maka akara signitla